Cannon Shot! no ohatra amin'ny fampiasana tsara ny fizika zavatra | Androidsis
Ny fizika zavatra tsara indrindra amin'ny Cannon Shot mahazatra!
Cannon Shot! dia lalao mahazatra mahazatra izay lalaovinao amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny fizika zavatra ary ireo baolina izay tifirinay tamin'ny tafondro. Ireo baolina ireo dia tsy maintsy tonga any amin'ny nalehany mba hifanaraka tsara ao anaty kioba ary afaka manohy mandroso hatrany hatrany isika.
Ny tsara indrindra dia ny famolavolana ny haavon'ny tenany ihany ka tsy maintsy ataontsika tapaho kely ny voanio rehefa mandroso isika. Ary ity lohateny ity dia manana fiolanana sarotra hanampiana singa rehefa mandroso isika. Tsy manadino fiteny famolavolana sary mahafinaritra.
1 Apetraho tsara ireo sombin-tsarimihetsika
2 Manasarotra ny raharaha amin'ny Cannon Shot!
3 Ny fizika fizika dia manana ny anjarany
Apetraho tsara ireo sombin-tsarimihetsika
Voalohany, ao amin'ny Cannon Shot! tsy maintsy mametraka sehatra izay hikarakara isika ho "bounc" mila ilaintsika ny baolina izay mitifitra hahatratra ny tanjona farany. Tsy iza izany fa ny miditra amin'ny goba.
Ny iraka ataontsika dia ny manandrana manatratra ny toerana alehany ny baolina rehetra, na dia tsy ho mora aza izany, satria hanomboka izy ireo mitsangàna singa sy mekanisma kisendrasendra samihafas izay tsy maintsy hataontsika. Miresaka mekanisma miodina na mihetsika isika ka miova ny làlana ary tsy tonga any amin'ny nalehany ireo baolina ireo.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila mamindra zavatra marobe ianao mamorona ny làlan-kaleha tonga lafatra ho an'ireo baolina notifirinao. Farafaharatsiny mba hahafahanao manao fitsapana amin'ny baolina voatifitra ary raha vantany vao azonao tsara ilay làlana, ary tazomy ny efijery handefasana ny ambiny.
Manasarotra ny raharaha amin'ny Cannon Shot!
Ary misaotra anao nanao ny sarotra. Voalohany indrindra dia tsy maintsy ataontsika izany andraso fa mihetsiketsika ny sket avy any afobe mba hanadio ny lalana sy haka ny fotoana hanombohana fitifirana. Toy izany koa no mitranga amin'ireo sehatra izay tsy maintsy apetrantsika eo am-piandohana ary tokony hapetraka tsara amin'ny toerana mety izy ireo mba hipoiran'ny baolina amin'ny haavo mety hitsambikina ny karazana singa rehetra.
Ianao aza tsy maintsy hiatrika boss farany rehefa vitanao ny quota n'ny ambaratonga x ary indrindra hanafoanana ny ain'ny sefo farany. Ho voaro amin'ny mekanisma sasany izany ka tsy maintsy mianatra tsara isika rehefa afaka manararaotra ny fotoana hanombohana amin'ny fitifirana baolina.
Toy izao no fisehoan-javatra tsy mahazatra mahazo tsikera mahatsikaiky ary izany dia napetraka ho toy ny lojika mahazatra izay tokony hieritreretantsika kely alohan'ny hitifirana ny tafondro. Izany rehetra izany dia zatra fizika zavatra tena izy izay manampy antsika hamita ny haavony. Ny mpampianatra fizika dia tsara raha asehony amin'ny mpianany ny sasany amin'ireo lalàna mihatra amin'ny Cannon Shot!
Ny fizika fizika dia manana ny anjarany
Fandraisana an-tanana tena soso-kevitra ary amin'izany dia hanana ambaratonga tsara mba hankafizanao amin'ny fomba mangina ary tsy maimaika. Satria eto dia miankina amin'ny fanerena ny efijery handrehitra ny tafondro ny zava-drehetra ary mandefa ny baoliny amin'ny làlan-kaleha izy ary mikarakara ny fametrahana ireo singa mifanaraka amin'izany izahay mba hahatanteraka ny tanjona.
Freemium rehetra miaraka amin'ny fizika lehibe zavatra ary miavaka amin'ny fananana estetika tsara hita maso Manampy amin'ny fahatakarana ny lojikan'ireo haavo ireo. Iray amin'ireo lalao mandeha tsara amin'ny mekanika, ny famolavolana ary ny haavony izay mitandrina kokoa. Mazava ho azy, ny freemium dia mitovy amin'ny dokam-barotra sy ireo doka izay tsy maintsy ho hitanao, raha tsy mandoa vola ianao.
Cannon Shot! anananao maimaim-poana avy amin'ny Play Store hanatevin-daharana ireo mpilalao an'arivony izay efa mankafy ny fizika zava-bitany ary io fomba tsotra io amin'ny fahazoana manao lalao sarotra nefa feno. Avelanay miaraka amin'ny iray hafa ianao mahafinaritra fotsiny avy amin'ny Ketchapp Games ary efa zatra mamoaka lalao mahafinaritra amin'ity sokajy ity izy.
Fizika zavatra tsara
Ny hatsarany amin'ny endriny sy ny endriny
Mihazona dokam-barotra 30 segondra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny fizika zavatra tsara indrindra amin'ny Cannon Shot mahazatra!
Sony dia tsy afaka maharaka amin'ny fangatahana ireo sary sensor
Nipoitra indray ny Galaxy Fold 2 ary ny Galaxy S11 dia Galaxy S20